Alexa ကိုမီးခွက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပုံ Emulator.online ▷🥇
စမတ်မီးလုံးများသည်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်သဘောတရားကိုယူဆောင်လာရန်ပထမဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းများ၏ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှု (အသံအမိန့်ဖြင့်အကူအညီဖြင့်ပင်) ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် smart မီးသီးတစ်လုံးသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး Amazon Echo နှင့် Alexa တို့မှပေးသော voice command များဖြင့်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်လိုပါကဤလမ်းညွှန်တွင်သင့်ကိုပြလိမ့်မည်။ Alexa ကိုအလင်းများနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နှင့်၎င်းတို့ပေါ်တွင်မည်သည့်အသံအမိန့်ပေးနိုင်မည်နည်း။
အခန်းတစ်ခုအနေနှင့်မည်သည့်စမတ်မီးလုံးများသည် Alexa နှင့် Amazon Echo နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အတွက်အသံအမိန့်များကိုသင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြုပြင်နိုင်မည်။
အဖတ်ကိုလည်း: အမေဇုံ Alexa: ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အသံအသစ်များ command များဖန်တီးနည်း
အမေဇုံ Alexa နှင့်လိုက်ဖက်သောအလင်းနှင့်ပလပ်
အသံအမိန့်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီစမတ်အလင်းများသည် Alexa နှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်သေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းတို့ကိုစနစ်ထဲသို့ထည့်။ အဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်မီးလုံးများကို ၀ ယ်ယူပြီးဖြစ်ပါက“ Amazon Alexa နှင့်လိုက်ဖက်သော” သို့မဟုတ်“ အမေဇုံ Echo သဟဇာတ” ကိုထုပ်ပိုးခြင်းတွင်သို့မဟုတ်လက်စွဲတွင်ဖော်ပြထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လိုက်ဖက်သောမီးလုံးများသို့မဟုတ်မီးသီးများမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနိုင်သည် Alexa နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ LED အလင်းထိုကဲ့သို့သောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမော်ဒယ်များအဖြစ်။
Philips မီးအိမ်မှမီးရောင် LED (€ 30)
Bulb TP-Link KL110 Wi-Fi E27 သည်အမေဇုံ Alexa နှင့်အလုပ်လုပ်သည် (ယူရို ၁၄)
Smart မီးသီး၊ LOFTer E27 RGB 7W WiFi စမတ်မီးသီး (ယူရို ၁၆)
Smart မီးသီး E27 AISIRER (၂ ပိုင်း၊ ၂ ယူရို)
TECKIN E27 ရောင်စုံမီးရောင်မီးသီး (€ 49)
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိပြီးသားမီးသီးများ (သဟဇာတမပါဘဲ) ကိုပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက Smart WiFi E27 Light socket, Aicase Intelligent WLAN (ယူရို ၂၉) စသည့်မည်သည့်မီးလုံးအတွက်မဆို smart adapters များကို ၀ ယ်ယူရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
the ည့်ခန်း (သို့) အိပ်ခန်းထဲရှိမီးများ (တိကျစွာပလပ်များရှိသူများ) ကိုကျွန်ုပ်တို့ညှိလိုပါသလား။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း smart Wi-Fi sockets များကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်စမတ်မီးသီးများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
Presa Intelligent WiFi Smart Plug Telecomando ZOOZEE (ယူရို ၁၄)
Philips မှ Hue power socket (ယူရို ၄၁)
စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်မှုနှင့်အတူ TP-Link HS110 ဝိုင်ဖိုင် Socket (€ 29)
Smart Plug WiFi Smart Plug ပါဝါမော်နီတာ plug (၄ ပိုင်း၊ ယူရို ၂၀)
စာရင်းထုတ်ထားသောထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Alexa နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည် ) ဤအခြေခံတည်ဆောက်ပြီးမှသာ Alexa setup ကိုဆက်လုပ်နိုင်သည်။
အမေဇုံ Alexa မှမီးအိမ်ချိတ်ဆက်ပါ
စမတ်မီးသီးများ (သို့မဟုတ်အကြံပြုထားသည့်ပလပ်များသို့မဟုတ် adapters များ) ကိုချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းတို့အားအိမ်တွင်းဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်နှင့်စနစ်တကျချိတ်ဆက်ပြီးပါကစမတ်ဖုန်းတစ်ခုယူပြီးအက်ပလီကေးရှင်းကိုထည့်သွင်းကြပါစို့ အမေဇုံ Alexa, Android နှင့် iOS အတွက်ရရှိနိုင်
အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးပါက၎င်းကိုဖွင့်ပြီးအမေဇုံအကောင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၌ Amazon အကောင့်မရှိသေးပါကအက်ပ်အတွင်း၌သို့မဟုတ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာဖန်တီးနိုင်သည်။
ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ devices များ ညာဘက်အောက်ဘက်ရှိညာဘက်အပေါ် + + ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ ကိရိယာထည့်ပါ။ မြင်ကွင်းအသစ်တွင် configure လုပ်မည့် device အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ option ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပါသည်။ မီးသီး တစ် ဦး စမတ်မီးသီး configure ရန်, စာနယ်ဇင်း အမှု၌ငါတို့သည်တစ်စမတ် plug ကို၏အပိုင်ရှိကြ၏သို့မဟုတ် ပွောငျးလဲခွငျး အမှု၌ကျွန်တော်တစ် ဦး မီးသီးများအတွက် Wi-Fi ကို adapter ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အခုဝင်ကြည့်ရအောင် အဲဒါအမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ ?, ငါတို့ပစ္စည်း၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးပါကျနော်တို့ခလုတ်ကို select လုပ်ပါ ဆက်လက်ပြီးရှိသည် ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒြပ်စင်ကိုထိပါ အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါ; ယခု ၀ ယ်ထားသောမီးများ၊ ပလပ်များ (သို့) ခလုတ်များနှင့်ဆက်စပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အထောက်အထားများကိုတောင်းခံလိမ့်မည်။ သင်မှန်ကန်သောအထောက်အထားများကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ရိုးရှင်းစွာရွေးချယ်ပါ ယခုချိတ်ဆက်ပါ အထဲမှာ device ကိုထိန်းချုပ်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့ Alexa.
အကယ်၍ စက်၏အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲထိတွေ့နိုင်သည် အခြား Alexa အတွင်း၌ပေါ်လာစေရန်ကိရိယာကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပါ။ ဆက်သွယ်ပြီးသောအခါ၊ ဖုန်းတွင်မည်သည့်အခန်း (သို့) အမျိုးအစားထည့်ရမည်ကိုဖော်ပြရန် (မီးဖိုချောင်၊ room ည့်ခန်းစသည်တို့) ရွေးရန်လိုပြီးကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးပြီ.
ကိရိယာများအားလုံးကို Alexa အက်ပ်ထဲသို့ထည့်ပြီးသောအခါ Alexa အက်ပ်မှသို့မဟုတ် setup အတွက်အသုံးပြုသည့်အမေဇုံအကောင့်တစ်ခုနှင့်အတူထူထောင်ထားသည့်အမေဇုံပဲ့တင်သံမှအသံ command များကိုသုံးနိုင်သည်။
Alexa နှင့်အလင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးချနိုင်သော command များစာရင်းမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
"Alexa၊ [nome device] ကိုဖွင့်ပါ"
"Alexa၊ room ည့်ခန်းရှိမီးလုံးအားလုံးကိုဖွင့်ပါ"
ညနေ ၆ နာရီမှာ6ည့်ခန်းမီးကိုဖွင့်ပါ။
"Alexa၊ ည ၈ နာရီမှာငါ့ကိုနှိုးပြီးအိမ်ရှိမီးလုံးအားလုံးကိုဖွင့်ပါ"
Alexa များမီးချပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောအသံအမိန့်အချို့ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် အမေဇုံပဲ့တင်သံ၏ထူးခြားချက်များ၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်အဘယ်အရာအတွက်ဖြစ်သည်.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာနှင့်အတူတူပင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်လိုပါက (ထို့ကြောင့်ဂူဂဲလ်လက်ထောက်၏အားသာချက်ကိုယူပါ) ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ ဂူဂဲလ်ပင်မစာမျက်နှာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာ - အသံလက်ထောက်၊ ဂီတနှင့်အိမ်အလိုအလျောက်။ အမေဇုံ Alexa နှင့်ဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာအကြားမည်သည့်အရာကိုရွေးရမည်ကိုသေချာမသိပါ သင်၏အသေးစိတ်မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းစွာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများစွာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Alexa သို့မဟုတ် Google Home? အကောင်းဆုံးစမတ်စပီကာများနှင့်အမြင့်မားဆုံးအကြားနှိုင်းယှဉ်.